ခေတ်လူငယ်တိုင်းရဲ့ ခိုနားရာလေး လတ်တလော နာမည်အကြီးဆုံး Mary's Cafe
ခေတ်လူငယ်တိုင်းရဲ့ ခိုနားရာလေး လတ်တလော နာမည်အကြီးဆုံး Mary’s Cafe
7 Jun 2018 . 6:19 PM
လတ်တလော ရန်ကုန်မြို့မှာ လူငယ်အဆန်ဆုံးနဲ့ ချစ်ဖို့အကောင်းဆုံး ဆိုင်လှလှလေးတစ်ဆိုင် ဖွင့်ထားတာ သိပြီးကြပြီလား?
အထာကျပြီး ခေတ်ဟောင်းနဲ့ လူငယ်စတိုင်ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ တိတ်ဆိတ်အေးချမ်းစရာ ကမ္ဘာလေးမို့ လူငယ်လေးတွေ၊ ကောင်မလေးတွေ တော်တော်များများ အပြေးအလွှား သွားကြ၊ စားကြ၊ ပုံလေးတွေရိုက်ပြီးတင်ကြနဲ့ Facebook ပေါ်ရော Instagram ပေါ်မှာပါ နာမည်ကြီးနေပြီဆိုတော့ကာ အခရာရဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် ဆိုင်အနေအထားဘာညာကာလာကို သတင်းအစုံအလင် သိရအောင် မတိမ်းမစောင်း ဗိန်းမောင်းတီးပြီး ဆိုင်ဖွင့်ရက်လေးတစ်ရက်မှာ အပြေးအမီ ချီကာတက်ခဲ့ပြီနော်။
ဆိုင်လေးက ရန်ကင်း၊ ကျောက်ကုန်းလမ်းထဲ အ.ထ.က (၂) ရန်ကင်း ဘေးက လမ်းသွယ်လေးထဲမှာ ရှိတယ်။ နေရာအနေအထား ရှာရတာ မသိရင် လမ်းတော်တော်လည်မယ့် Hidden Paradise လေး။ ရောက်သွားရင်တော့ အမောပြေရမှာ။
ပြင်ထားတဲ့အပြင်အဆင်လေးက နေရာအကုန်လုံး Instagrammy Spot လေးပါ။ အတွင်းဘက်အခန်းလေးက Vintage ဆန်တယ်။ စာအုပ်အဟောင်းလေးတွေ၊ ကင်မရာတွေ၊ ကတ်ဆက်တိပ်ခွေလေးတွေနဲ့ ဓါတ်ပုံလေးတွေ ချိတ်ထားတာကိုက နွေးနွေးထွေးထွေးချစ်စရာလေး။
အတွင်းခန်းထဲမှာ စားပွဲ ၄,၅ ခုရှိတယ်။ အပြင်ဘက်ကို မှန်ထဲကနေငေးလို့ရတဲ့ ဘားလေးရှိတယ်။
အပြင်မှာဆို? နာမည်ကြီး ဘတ်စကတ်ဘောဆော့လို့ရတဲ့ ကွင်းဝါဝါလေးက ဒီဆိုင်လေးရဲ့ နာမည်အကြီးဆုံး ထူးခြားချက်လေးနော်။ အဝါရောင်ဆိုတာ Instagrammy Theme ဆိုတော့ ဒီကွင်းလေးနဲ့ ဓါတ်ပုံရိုက်ဖို့လည်း မမေ့ခဲ့နဲ့နော်။
သူ့ဘေးမှာက ခြံဝန်းလေး။ ခုံလေးတွေတော့ခင်းထားလေရဲ့။ ကောင်မလေးတွေ လုထိုင်ရမယ့် ခုံလေးရှိတယ်။ ပုံထဲမှာ ရှာပါ။
သဘောကျစရာအကောင်းဆုံးကတော့ Photo Booth နီနီလေး။ သူ့ဘေးနားမှာ စုံတွဲတွေအကြည့်ချင်း ဖလှယ်ပြီး ဓါတ်ဖမ်းလို့ အရမ်းရိုမယ့် Love at first Sight စာတန်းလေးလည်း ရှိသေးတယ်။
ဘာစားခဲ့လဲဆိုရင်တော့ Menu တွေထဲက Butter Fish With Lemon Sauce လေးကို Mashed Potato လေးနဲ့ရယ်၊ Lemon Ice Tea လေးရယ်နဲ့ သာယာခဲ့တယ်။
သူ့ Butter Fish လေးကို Page မှာ ကြေညာတည်းက သရေကျခဲ့တာမို့ လက်တွေ့စားကြည့်တော့ ငါးက ငရုတ်ကောင်းမှုန့်လေးတွေနဲ့ မွှေးနေပြီး Grill လုပ်ထားတာ သဒ္ဒါပိုသွားတယ်ထင့် အကျက်လွန်သွားပါလေရော။ ဒါပေမယ့် စားကောင်းတယ်။ Mashed Potato အများကြီးပဲ။ Lemon Sauce အချဉ်စူစူးလေးနဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ငါးနဲ့ဆော့စ်ပါပဲလို့။
Ice Lemon Tea လေးက အမောပြေ ချဉ်မွှေးလေး။ ၉၀၀ တည်းပေးရတယ်။
Mary’s ဆိုင်လေးမှာ မနက်စာလည်း ရတယ်။ နေ့လည်စာ ထမင်းဟင်း Set လေးတွေလည်း ရတယ်။ ဘိုစာစားမလား ဘာလာလာဒေါင်းပြီးသား။ Menu လေး တော့ ဒီထက်စုံရင် သိပ်ကောင်းမှာ။ မိုးတွင်းဆိုတော့ ယင်ကောင်လည်း ရှိတယ်။
ဆိုင်လေးက Outdoor အဓိကအသားပေးမို့ မိုးရွာနေရင် မသွားစေချင်ဘူး။ မိုးအုံ့အုံ့လေးကတော့ ထိုင်လို့အလှဆုံးပဲ။ တွေ့ရသလောက် ကောင်မလေးလန်းလန်းလေးတွေ သူငယ်ချင်းအုပ်လိုက်နဲ့လာကြ ဓါတ်ပုံရိုက်ကြနဲ့ ပျော်စရာ မျက်စိပသာဒဖြစ်စရာလေး။
ဖွင့်ချိန် က အင်္ဂါ ဗုဒ္ဓဟူး ကြာသပတေး ဆို မနက် ၈ နာရီ ကနေ ၅ နာရီထိ။ သောကြာ၊ စနေ၊ တနင်္ဂနွေဆို မနက် ၇ခွဲ မှညနေ ၆ နာရီထိ ပါတဲ့။ သတိ တင်္နလာတစ်ရက် လုံးဝပိတ်ပါတယ်နော်။
ဆိုင်လေးက Location မပေါ်သေးလို့ Grab တို့လို Taxi Service တွေနဲ့ ဌားလို့မရသေးဘူး။ ဒါလေးတော့ သတိထားနော်။
ဒါဆို Instagram မှာ ဓါတ်ပုံလှလှလေးတင်ဖို့ Background ကောင်းကောင်းလေးရှာနေပြီလား? အေးအေးဆေးဆေး တစ်နေကုန် Chill ဖို့ တိတ်ဆိတ်တဲ့ ဆိုင်လေး ရှာနေပြီလား။ Mary’s ကမ္ဘာလေးက လူငယ်အဆန်ဆုံး Chilli လို့ကောင်းမယ့် ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ Best Spot Ever ပါလို့။
ခတျေလူငယျတိုငျးရဲ့ ခိုနားရာလေး လတျတလော နာမညျအကွီးဆုံး Mary’s Cafe
လတျတလော ရနျကုနျမွို့မှာ လူငယျအဆနျဆုံးနဲ့ ခဈြဖို့အကောငျးဆုံး ဆိုငျလှလှလေးတဈဆိုငျ ဖှငျ့ထားတာ သိပွီးကွပွီလား?
အထာကပြွီး ခတျေဟောငျးနဲ့ လူငယျစတိုငျပေါငျးစပျထားတဲ့ တိတျဆိတျအေးခမျြးစရာ ကမ်ဘာလေးမို့ လူငယျလေးတှေ၊ ကောငျမလေးတှေ တျောတျောမြားမြား အပွေးအလှား သှားကွ၊ စားကွ၊ ပုံလေးတှရေိုကျပွီးတငျကွနဲ့ Facebook ပျေါရော Instagram ပျေါမှာပါ နာမညျကွီးနပွေီဆိုတော့ကာ အခရာရဲ့ ပရိသတျတှအေတှကျ ဆိုငျအနအေထားဘာညာကာလာကို သတငျးအစုံအလငျ သိရအောငျ မတိမျးမစောငျး ဗိနျးမောငျးတီးပွီး ဆိုငျဖှငျ့ရကျလေးတဈရကျမှာ အပွေးအမီ ခြီကာတကျခဲ့ပွီနျော။
ဆိုငျလေးက ရနျကငျး၊ ကြောကျကုနျးလမျးထဲ အ.ထ.က (၂) ရနျကငျး ဘေးက လမျးသှယျလေးထဲမှာ ရှိတယျ။ နရောအနအေထား ရှာရတာ မသိရငျ လမျးတျောတျောလညျမယျ့ Hidden Paradise လေး။ ရောကျသှားရငျတော့ အမောပွရေမှာ။
ပွငျထားတဲ့အပွငျအဆငျလေးက နရောအကုနျလုံး Instagrammy Spot လေးပါ။ အတှငျးဘကျအခနျးလေးက Vintage ဆနျတယျ။ စာအုပျအဟောငျးလေးတှေ၊ ကငျမရာတှေ၊ ကတျဆကျတိပျခှလေေးတှနေဲ့ ဓါတျပုံလေးတှေ ခြိတျထားတာကိုက နှေးနှေးထှေးထှေးခဈြစရာလေး။
အတှငျးခနျးထဲမှာ စားပှဲ ၄,၅ ခုရှိတယျ။ အပွငျဘကျကို မှနျထဲကနငေေးလို့ရတဲ့ ဘားလေးရှိတယျ။
အပွငျမှာဆို? နာမညျကွီး ဘတျစကတျဘောဆော့လို့ရတဲ့ ကှငျးဝါဝါလေးက ဒီဆိုငျလေးရဲ့ နာမညျအကွီးဆုံး ထူးခွားခကျြလေးနျော။ အဝါရောငျဆိုတာ Instagrammy Theme ဆိုတော့ ဒီကှငျးလေးနဲ့ ဓါတျပုံရိုကျဖို့လညျး မမခေဲ့နဲ့နျော။
သူ့ဘေးမှာက ခွံဝနျးလေး။ ခုံလေးတှတေော့ခငျးထားလရေဲ့။ ကောငျမလေးတှေ လုထိုငျရမယျ့ ခုံလေးရှိတယျ။ ပုံထဲမှာ ရှာပါ။
သဘောကစြရာအကောငျးဆုံးကတော့ Photo Booth နီနီလေး။ သူ့ဘေးနားမှာ စုံတှဲတှအေကွညျ့ခငျြး ဖလှယျပွီး ဓါတျဖမျးလို့ အရမျးရိုမယျ့ Love at first Sight စာတနျးလေးလညျး ရှိသေးတယျ။
ဘာစားခဲ့လဲဆိုရငျတော့ Menu တှထေဲက Butter Fish With Lemon Sauce လေးကို Mashed Potato လေးနဲ့ရယျ၊ Lemon Ice Tea လေးရယျနဲ့ သာယာခဲ့တယျ။
သူ့ Butter Fish လေးကို Page မှာ ကွညောတညျးက သရကေခြဲ့တာမို့ လကျတှစေ့ားကွညျ့တော့ ငါးက ငရုတျကောငျးမှုနျ့လေးတှနေဲ့ မှေးနပွေီး Grill လုပျထားတာ သဒ်ဒါပိုသှားတယျထငျ့ အကကျြလှနျသှားပါလရေော။ ဒါပမေယျ့ စားကောငျးတယျ။ Mashed Potato အမြားကွီးပဲ။ Lemon Sauce အခဉျြစူစူးလေးနဲ့ လိုကျဖကျတဲ့ငါးနဲ့ဆော့ဈပါပဲလို့။
Ice Lemon Tea လေးက အမောပွေ ခဉျြမှေးလေး။ ၉၀၀ တညျးပေးရတယျ။
Mary’s ဆိုငျလေးမှာ မနကျစာလညျး ရတယျ။ နလေ့ညျစာ ထမငျးဟငျး Set လေးတှလေညျး ရတယျ။ ဘိုစာစားမလား ဘာလာလာဒေါငျးပွီးသား။ Menu လေး တော့ ဒီထကျစုံရငျ သိပျကောငျးမှာ။ မိုးတှငျးဆိုတော့ ယငျကောငျလညျး ရှိတယျ။
ဆိုငျလေးက Outdoor အဓိကအသားပေးမို့ မိုးရှာနရေငျ မသှားစခေငျြဘူး။ မိုးအုံ့အုံ့လေးကတော့ ထိုငျလို့အလှဆုံးပဲ။ တှရေ့သလောကျ ကောငျမလေးလနျးလနျးလေးတှေ သူငယျခငျြးအုပျလိုကျနဲ့လာကွ ဓါတျပုံရိုကျကွနဲ့ ပြျောစရာ မကျြစိပသာဒဖွဈစရာလေး။
ဖှငျ့ခြိနျ က အင်ျဂါ ဗုဒ်ဓဟူး ကွာသပတေး ဆို မနကျ ၈ နာရီ ကနေ ၅ နာရီထိ။ သောကွာ၊ စနေ၊ တနင်ျဂနှဆေို မနကျ ၇ခှဲ မှညနေ ၆ နာရီထိ ပါတဲ့။ သတိ တင်ျနလာတဈရကျ လုံးဝပိတျပါတယျနျော။
ဆိုငျလေးက Location မပျေါသေးလို့ Grab တို့လို Taxi Service တှနေဲ့ ဌားလို့မရသေးဘူး။ ဒါလေးတော့ သတိထားနျော။
ဒါဆို Instagram မှာ ဓါတျပုံလှလှလေးတငျဖို့ Background ကောငျးကောငျးလေးရှာနပွေီလား? အေးအေးဆေးဆေး တဈနကေုနျ Chill ဖို့ တိတျဆိတျတဲ့ ဆိုငျလေး ရှာနပွေီလား။ Mary’s ကမ်ဘာလေးက လူငယျအဆနျဆုံး Chilli လို့ကောငျးမယျ့ ရနျကုနျမွို့ရဲ့ Best Spot Ever ပါလို့။